Graphic Designer(Female) (Above 300,000 MMK) Code-12175
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Brand Cosmetic များကို Trading လုပ်သောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– အတွေ့အကြုံ (၂)နှစ် အထက်ရှိရမည်။
– အသက် (၂၅) ၀န်းကျင်ရှိရမည်။
– Graphic Design နှင့်ပတ်သတ်ပြီးကျွမ်းကျင်ရမည်။
– Computer ကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။
– Cosmetics တွင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဦးစားပေးမည်။
စီဗီတင်ရန်(ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ) : [email protected]
Job Categories: Design. Job Types: Full-Time. Job Tags: graphic designer(female). Salary: 100,000 - 300,000. 193 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ